Edinson Cavani Oo Iskii Iskugu Bandhigay Real Madrid Si Fursad Loogu Siiyo Koobka Adduunka - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaEdinson Cavani Oo Iskii Iskugu Bandhigay Real Madrid Si Fursad Loogu Siiyo Koobka Adduunka
Edinson Cavani Oo Iskii Iskugu Bandhigay Real Madrid Si Fursad Loogu Siiyo Koobka Adduunka
Weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani ayaa iskii ula xidhiidhaya kooxda reer Spain ee Real Madrid, si uu ugu noqdo weeraryahanka labaad ee caawinaya Karim Benzema ama kursiga kaydka u fadhiyaya, kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Los Blancos ay iibinayso ama amaah ku diray Luka Jovic, sidoo kalena ay xagaagan meesha ka saarayaan Mariano Diaz.
Edinson Cavani oo uu ka dhamaaday qandaraaskiisii Manchester United oo si xor ah uga tegaya ayaa la sheegay in uu guri ka raadsanayo magaalada Madrid ee caasimadda Spain, waxaana jira kooxo kale oo ay suurtogal tahay inuu tago haddii uu ku guuleysan waayo inuu xidho garanka Real Madrid.
Atletico Madrid ayaa ka mid ah kooxaha lala xidhiidhinayo, halka Rayo Vallecano oo urursatay ciyaartooyo ruug-caddaa ah ay isagana isha ku hayaan, waxaanay doonayaan inay meel iskugu keenaan Ramadel Falcao oo ay Uruguay u wada dhasheen.
Edinson Cavani ayaa la rumaysan yahay in aanu wax mustaqbal ah ku lahayn horyaalka Premier League maadaama ay da’diisu weynaatay balse kooxaha yaryar ee Spain, gaar ahaan Rayo Vallecano ayay caqabad ku tahay mushaharka badan ee uu dalabayo laacibkani oo ah €4 milyan oo Euro.
Cavani ayaa waxa uu doonayaa in uu ka ciyaaro horyaalka LaLiga oo uu waliba fursad ka helo si uu uga mid noqdo xulka qaranka Uruguay ee bisha November ka qayb-gelaya Koobka Adduunka.
falcoa wa colombian maaha uruguay